Annapurna TV, Author at TV Annapurna
घरमा कमिला आउनु शुभ कि अशुभ ? यस्तो छ ज्योतिषहरुको भनाई
समानुपातिक तर्फ काँग्रेसले एमालेलाई भेट्टाउला ? यस्तो छ अहिलेसम्मको मत
अध्यादेशका विषयमा विवाद नगर्न नेता नेपालको आग्रह
राजकुमार ह्यारी र नायिका मर्केलको विवाह हुने मिति तोकियो
बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
Author: Annapurna TV
December 15, 2017 Annapurna TV
जापानी सम्राट् अकिहितोको ८४ औँ शुभजन्मोत्सवका अवसरमा नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले आज यहाँ स्वागत समारोह आयोजना गर्नुभएको छ । समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, मन्त्रिगण, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, नेपाल सरकारका विशिष्ट अधिकारी, नेपालको विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व, नेपालमा रहेका जापानी नागरिकलगायत व्यक्तित्वको सहभागिता थियो । नेपाल र जापानबीच सन् १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । समारोहमा उपस्थित व्यक्तित्वलाई नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले स्वागत गर्दै जापान नेपालको एक असल मित्र राष्ट्र रहेको तथा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् शैक्षिकलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासमा जापानले पु¥याउँदै आएको र आगामी दिनमा…
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–– ५ का मुक्तकमैया सामूहिक रुपमा माछापालन गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् । यहाँ करिब आठ हेक्टरमा रहेको प्राकृतिक ताललाई व्यवस्थित गरेर सोभाताल मुक्तकमैया शिविरमा बस्दै आएका ७९ किसानले व्यावासायिक रुपमा माछापालन गर्दैआएका छन् । विसं २०६० देखि नै सोभातालमा माछापालन गरिए पनि व्यवस्थित नहुँदा आम्दानी मनग्य हुनसकेको थिएन । विभिन्न दातृ निकायले पोखरी स्तरोन्नती गर्न तथा डिल निर्माणलगायत प्राविधिक सहयोग गरेपछि मुक्तकमैयाले विगत केही वर्षयता समूहमार्फत माछापालन गर्न थालेका हुन् । सोभाताल व्यावसायिक माछापालन समितिका कृपाराम चौधरीका अनुसार पोखरीको डिल बनाउन र पानीका लागि मोटर, बोरिङका लागि दातृ…
प्रदेश नं ३ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका नेताबीच दौडधुपःशाक्यदेखि स्थापितसम्म आकांक्षी
December 15, 2017 December 15, 2017 Annapurna TV
वाम गठबन्धनले प्रदेश नम्बर–३ मा स्पस्ट बहुमत ल्याएपछि प्रदेश सांसदहरु मुख्यमन्त्रीको आकांक्षीकारुपमा देखिएका छन् । प्रदेश नम्बर–३ प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनले ६६ मध्ये ५७ सिट जित हासिल गरेपछि मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप चलेको छ । मुख्यमन्त्रीको आकांक्षीमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख केशव स्थापितसम्म देखिएका छन् । निर्वाचनअगाडि नै मुख्यमन्त्रीकोरुपमा प्रस्तुत् भएका उनीहरु अहिले निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि आकांक्षीकोरुपमा प्रस्तुत् भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको आकांक्षीकोरुपमा शाक्य, स्थापितसँगै एमाले पोलिटब्यूरो सदस्यद्वय राजेन्द्र पाण्डे र सानुकुमार श्रेष्ठ, पशुपति चौलागाइँ, अरुण नेपाललगायत देखिएका छन् । उपाध्यक्ष शाक्य प्रमुख दाबेदारकारुपमा देखिएकी छन् । उनी…
फरार रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीको रिट दता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । चौधरी टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त हुन् । फरार रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका उनी भारी मतले विजयी भए । तर, निर्वाचन अधिकृतले वारेसमार्फत विजयी भएको प्रमाणपत्र दिएनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वारेसमार्फत पाउनु पर्ने माग गर्दै चौधरीले भाइमार्फत सर्वोच्च रिट दिएका थिए । तर, मुख्य रजिष्टार नहकुल सुवेदीले निवेदन अस्वीकार गरेका छन् । निवेदकले आफूमाथि टीकापुर घटनाको अभियोग लागेको र कानुनी प्रक्रियामा नरहेको स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस्तो…
माइक्रोबस र बस ठोक्किँदा १५ जना घाइते
तनहुँको ब्यास नगरपालिका–१२ स्थित घाँसीकुवामा शुक्रबार माइक्रोबस र बस ठोक्किँदा १५ जना घाइते भएका छन् । पोखराबाट काठमाडौं जाँदै गरेको ग१ख ६०६२ नम्बरको माइक्रोबस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको लु१ख ८७५९ नम्बरको बस एकापसमा ठोक्किँदा उनीहरु घाइते भएका हुन् । घाइतेको दमौलीस्थित रत्नहरि अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । माइक्रोबसले उछिन्नेक्रममा अगाडिबाट आएको बससँग ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो । दुवै बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ
पत्ता लाग्यो सूर्य जस्तै ८ ग्रहले घेरिएको तारा
अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले सौर्यमण्डल जस्तै ८ वटा ग्रहले घेरिएको तारा पत्ता लगाएका छन् । नासाका अनुसन्धानकर्ताले अन्तरिक्षमा पृथ्वीसहितका ८ ग्रहले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने जस्तै गरी ८ ग्रहले घेरिएको तारा पत्तालगाएका हुन् । यो सौर्यमण्डल बाहिर भेटिएको अहिलेसम्मकै ठूलो प्लानेटरी सिस्टम (ग्रह प्रणाली) हो । केप्लर–९० नाम गरेको यो तारा सूर्य भन्दा केही ठूलो र तातो छ । अन्तरिक्ष अनुसन्धानकर्ताले केप्लर–९० का सातवटा ग्रह यसअघि नै पत्तालगाएका थिए । अहिले नयाँ पत्तालागेको ग्रह सानो रहेको र चट्टानले भरिएको अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकले बताएका छन् । गुगलमा सफ्टवेयर इन्जिनियरको रुपमा काम गर्ने र…
कपाल रंगाउदा तपाई त राम्रो देखिनुहुन्छ तर तपाइको स्वास्थ्य नि? पढ्नुहोस् त
युवापिंडी आफ्नो कपालमा थरीथरीका कलरहरु लगाएर अरु भन्दा फरक देखिन चाहन्छन् । उनीहरु समय समयमा हेयर कलर पनि फेरिरहने गर्दछन् । तर यसरी कपालमा थरीथरीका रंग लगाउनु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुनसक्छ । अमेरिकामा भएको एक अनुसन्धानले कपालको कलर गर्ने खासगरी महिलाहरुमा घातक रोगको खतरा बढ्ने देखाएको छ । त्यस्तो कलरमा रहेको खतरनाक रसायनले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्न सक्छ । पार्लर र सैलुनमा कपालको स्टाइलका लागि प्रयोग उत्पादनले महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर लगायतका थुप्रै स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरु देखा पर्नै गर्दछ । न्यू जर्सीस्थित रटगर्स स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ एण्ड रटगर्स क्यान्सर इन्सिच्युटमा…
निद्रा नलागेर रातभरी छट्पटाउनुहुन्छ? एकपटक यसो गर्नुहोस त
स्वास्थ्यका लागि राम्रो र पुरा निन्द्रा सबैभन्दा आवश्यक चीजमध्येको एक हो । निन्द्राले केबल शरिरका कार्य मात्र सुनियन्त्रित नभई काममा खर्च भएको उर्जा फेरी शरिरमा एकत्रित गर्ने गर्दछ । तर प्रकृतिदेखिको बढ्दो दुरी, कामको व्यस्तता र खराब दिनचर्याका कारण मानिसहरुले राम्रो निन्द्रा लिन पाइरहेका छैनन । निन्द्राको विषयलाई लिएर फरक फरक मानिसहरुमा फरक फरक समस्या हुने गर्दछन् । खासमा हरेक मानिसहरुलाई ६ देखि ८ घण्टासम्मको निन्द्रा जरुरी हुने गर्दछ तर सबै मानिसका लागि फरक फरक समय आवश्यक हुने गर्दछ । अनिन्द्राको कारणः अनिन्द्रा अर्थात निन्द्रा नआउनुको धेरै कारण हुने गर्दछन्…
सहनै नसक्ने जाडो भएपछि विद्यालय फागुनसम्म बन्द हुने, के गर्लान् विद्यार्थीहरु?
जाडो बढेपछि हिमाली जिल्ला मनाङका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द भएका छन् । चालु शैक्षिकसत्रको अन्तिम परीक्षा सकेर विद्यालयहरु बन्द गरिएका हुन् । मंसिर २० गते अन्तिम परीक्षा सकिएपछि विद्यार्थीसहित स्थानीय जाडो छल्न बेसीतर्फ झरेका छन् । मनाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी टुकराज अधिकारीले परीक्षा सकिएपछि विद्यालयहरु बन्द भएको र अब फागुनमा नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएपछिमात्र सन्चालनमा आउने जानकारी दिए । शिक्षा नियमावलीमा ५० दिनमात्र जाडो बिदाको प्रावधान भएपनि माथिल्लो मनाङमा करिब तीन महिना र तल्लो मनाङमा दुई महिना विद्यालय बन्द हुने गर्छन् । बाह्रै महिना हिउँ जम्ने भएकाले माथिल्लो मनाङका केही…
समानुपातिकको मतपरिणाममा पनि धक्का खाएका बावुरामले के भने त?
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले भर्खरै सम्पन्न भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातितर्फ आफूहरुले अपेक्षा गरेअनुसारको मत प्राप्त नभएपनि जनादेशको सम्मान गर्ने बताएका छन् ।शुक्रबार समाजिक सञ्चाल ट्वीटरमार्फत संयोजक भट्टराईले समानुपातिकमा नयाँ शक्तिले अपेक्षा गरेअनुसारको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै जनादेशको पालना गर्ने बताएका हुन् । भट्टराईले भनेका छन्, ”समानुपातिकतर्फ नयाँ शक्तिलाई अपेक्षित मत प्राप्त नभए पनि हामी जनादेशको सम्मान गर्छौं र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण अभियानमा निरन्तर लागिरहनेछौं ।” उनले आफ्ना कमीकमजोरीहरुलाई सच्याएर आगामी दिनहरुमा अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् । ”हामी आफ्ना कमीकमजोरीको निर्मम…
केपी ओली र प्रचण्डबीच यस्तो सहमति भयो अब के हुन्छ ?
फागुन २६ मा सलमान खान टुंडिखेलमा हाजिर भएनन् भने ? विस्तृतमा
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको जारी मतगणनामा नेकपा (एमाले)को अग्रता कायमै छ । निर्वाचन आयोगको...
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि नेपाली काँग्रेसले विभिन्न अध्यादेशका विषयमा विवाद...
सुरुङ्गा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको दमक र कमल गाउँपालिका जोड्ने रतुवा पुलमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा आज साँझ...
अदक्ष ड्राईवरले सवारी हाँक्दा दुर्घटनामा परिन्छ। नेपाली कांग्रेसको सवालमा मात्र नभएर नेपाली राजनितिमा स्थापित राजनैतिक दलरुपी...
काठमाडौं । नेपाल एसीसी अन्डर यु–१६ क्रिकेट च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । समूह चरणको अन्तिम खेलमा म्यानमारलाई ३३७ रनको विशाल अन्तरले हराउँदै समूह विजेताकोरुपमा नेपाल प्रतियोगिताको अन्तिम चारमा पुगेको हो । बिहीबारको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ३५१ रनको लक्ष्य दिएको थियो । विस्फोटक ब्याटिङ...
म्यानमार सामु नेपालले दियो ३ सय ५१ रनको लक्ष्य
एसीसी यू— १६ इस्र्टन रिजन च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समुहको अन्तिम खेलमा नेपालले म्यानमारलाइ ३ सय ५१ रनको...
दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) को आयोजनामा हुने साफ च्याम्पियनसिप फुटबल आगामी वर्ष बंगलादेशमा सञ्चालन हुने...